TPLF Oo Qeylo-dhaan ka Dirtay Diyaaradaha Droneska Ee ay Ciidamada Itoobiya Wataan AwdalMedia Awdalmedia TPLF Oo Qeylo-dhaan ka Dirtay Diyaaradaha Droneska Ee ay Ciidamada Itoobiya Wataan
Jabhada TPLF ayaa walaac ka muujisay dayuuradaha Droneska ee ay dagaalka u isticmaalayaan ciidamada Itoobiya.
Khasaare culus ayaa la sheegay in kooxda TPLF uu ka soo gaaray weeradada cirka ah ee ay fuliyeen dayuuradaha Droneska ciidamada Itoobiya, kuwaasoo sababay in dib looga saaro magaalooyin badan oo ay u qabsadeen.
Qoraal TPLF u dirtay Xoghayaha guud ee Qaramada Middoobay ayay kaga codsadeen in tallaabo laga qaado dalalka Itoobiya ku taageeray dayuuradaha Droneska oo ay sheegeen iney collaada dalkaas sii hurrinayaan.
Dalalka ay sheegen inay Itoobiya ku taageraayaan hubka waxaa ka mid ah: Imaaraadka, Iiran iyo Turkiga.
TPLF waxay QM u soo jeedisay in duqaymaha loo aqoonsado dambiyo dagaal oo ka dhan ah xuquuqaha aadamiga, lana joojiyo dalalka Itoobiya hubka ka iibinaya ee burburinaya dalka.
Waxaa joogsaday Socodkii Jabhada TPLF oo markii hore guulo badan ka gaartay dagaalka tan iyo markii RW Itoobiya oo iska xaadiriyey furumaha dagaalka taasoo kor u soo qaaday moralka ciidamada.
Milateriga Itoobiya oo gacan siinaya maleeshiyaad maxali ah ayaa ku guuleystay iney guud ahaan degaanka cafarta ka saaraan xoogaga TPLF, sidoo kale waxaa dib looga qabsaday kooxdan magaalooyin ka tirsan gobolka Axmaarada, iyadoo ciidamada Itoobiya sheegeen iney ka baxeen xaaladii isdifaaca ay wixii hadda ka dambeeya yihiin weerar.